Askari Ka Tirsanaan Jiray Ciidamada Ingiriiska Oo Xabsi Lagu Xukumay Kadib Markii Uu Isku Dayay Inuu Dhaco Guriga Mid Ka Mid Ah Xidigaha Man United - Wargane News
Home Sports Askari Ka Tirsanaan Jiray Ciidamada Ingiriiska Oo Xabsi Lagu Xukumay Kadib Markii...
Shaqsi horay uga tirsanaa ciidamada xooga dalka England ayaa lagu xukumay laba sano iyo sideed bilood oo xabsi ah maalinimadii Arbacada aheyd kadib markii uu isku dayay inuu u dhaco guriga kabtanka Manchester United Wayne Rooney.
Robert McNamara oo 25-jir ah ayaa isku dayay inuu galo guriga Rooney oo ku yaala Cheshire, waqooyi Galbeed England si uu wax uun uga soo xado.
Waxaa lasoo sheegayaa in waqtigaas ay jirtay ciyaartii ka dhaceysay Old Trafford ee lagu sharfayay Wayne Rooney markaas oo ay kooxdiisa soo dhaweysay kooxdisii h–e Everton, 3-dii August.
“Kadib markii ay arintu dhacday habeenkii oo dhan waxaa nagu dhacay hurdo la’aan, anigoo walwalsan sidoo kalana eegaya mar walba kaamirada amaanka anigoo ka cabsi qaba inuu qof joogo”
“Waxaan sidoo kale u cabsaday caruurteyda ku ciyaarayay jardiinka banaanka, ilaa walina waan u cabsadaa” ayey tiri Coleen oo ah xaaska Wayne Rooney.
Si kastaba Coleen iyo caruurteeda ayaa ku sugnaa Old Trafford waqtiga ay dhacdada dhacday madaama ay diyaar u ahaayeen iney daawadaan Wayne oo lagu sharfayo Old Trafford.
Ugu dambeyntiina booliska Cheshire ayaa soo helay cadeymo muujinaya in McNamara uu ahaa shaqsigii isku dayay inuu isku dayay galitaanka guriga Wayne Rooney, maxkamadda ayaana ku xukuntay 2-sano iyo 8-bilood oo xabsi ah.